Xubuntu 18.04 LTS တပ်ဆင်ခြင်းလမ်းညွှန် | Linux မှ
Xubuntu 18.04 LTS တပ်ဆင်ခြင်းလမ်းညွှန်
Ya Ubuntu 18.04 LTS ကိုဖြန့်ချိခဲ့သည်အခြားအရသာများသည်တည်ငြိမ်သောဗားရှင်းများကိုစတင်ရန်အလားတူလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဒီကိစ္စမှာ ငါသည်သင်တို့ကိုဤနည်းနည်း installation ကိုလမ်းညွှန်မျှဝေဖို့လာကြ၏ Xubuntu 18.04 LTS ၏။
Xubuntu အားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Ubuntu ရဲ့အရသာတစ်ခုပါ များစွာသော system အရင်းအမြစ်များကိုမလိုအပ်ပါဒါကိုအလင်းဖြန့်ဖြူးခြင်းလို့ခွဲခြားတယ်။ ထို့အပြင်၎င်းဖြန့်ဖြူးမှုသည် 32-bit system များအတွက် support ဆက်လက်ရှိနေသေးသည် Ubuntu နှင့်မတူသည်
ဒေါင်းလုပ်မလုပ်မီ Xubuntu 18.04 LTS ကိုအသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည်လိုအပ်ချက်များလိုအပ်သည်ကိုသိရန်လိုအပ်သည်။
1 Xubuntu 18.04 LTS ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်ချက်များ
2 Xubuntu 18.04 LTS ကိုမည်သို့ထည့်သွင်းရမည်နည်း
3 Xubuntu 18.04 LTS တပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်
Xubuntu 18.04 LTS ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်ချက်များ
system ကို run ဖို့နှင့်ဤအတွက်အခြေခံလိုအပ်ချက်များကိုသုံးစွဲဖို့နိုင်ဖို့အတွက် ငါတို့အဖွဲ့အနည်းဆုံးလိုတယ်:
512MB RAM ကို
8 GB နေရာလွတ်ရှိသည်
ဂရပ်ဖစ်ကဒ် 800 × 600 အနည်းဆုံး resolution ပါ
DVD drive (သို့) USB port
အကြံပြုလိုအပ်ချက်များ စနစ်တွင်အကန့်အသတ်မရှိအတွေ့အကြုံရှိရန်မှာ -
1 RAM နောက်ပိုင်းတွင်
20 GB နေရာလွတ်ရှိသည်
အနည်းဆုံး 1024 × 1280 ကိုထောက်ပံ့သောဂရပ်ဖစ်ကဒ်
Xubuntu 18.04 LTS ကိုမည်သို့ထည့်သွင်းရမည်နည်း
ကျနော်တို့ကနေ download လုပ်ဖို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ် iso တရားဝင် site ကို စနစ်၏ Torrent သို့မဟုတ် Magnet link မှတဆင့် download ရယူရန်ကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်.
ဒေါင်းလုပ်ချပြီးသည်နှင့်သင် iso ကို DVD တစ်ခုသို့မဟုတ် USB ပေါ်တွင်ကူးယူနိုင်သည်။ ဒီဗီဒီမှပြုလုပ်ရန်နည်းလမ်း:
Windows ကို: ကျနော်တို့ iso Imgburn နှင့်အတူမှတ်တမ်းတင်နိုင်ပါတယ်, UltraISO, Nero သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်ပရိုဂရမ်မဆို Windows တွင်မပါဘဲ၎င်းသည် ISO ကိုမှန်ကန်စွာ နှိပ်၍ ရွေးချယ်နိုင်သည်။
Linux: သူတို့ဟာအထူးသဖြင့် graphical enviroments တွေနဲ့လာတဲ့သူကိုသုံးနိုင်တယ်၊ Brasero, k3b နှင့် Xfburn.
Windows: သူတို့သုံးနိုင်သည် Universal USB Installer ပါ သို့မဟုတ် Linux Live USB Creator ကိုသုံးရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။
Linux: ဒီညွှန်ကြားချက်သည် dd command ကိုသုံးရန်ဖြစ်သည်။ USB ပေါ်တွင်မည်သည့် drive ကိုတပ်ဆင်ထားသည်ကိုစစ်ဆေးရန်အရေးကြီးသည်။
Xubuntu 18.04 LTS တပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်
ကျွန်ုပ်တို့၏ installation medium ကိုပြင်ဆင်ပြီးပါက၎င်းကို boot ပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ပစ္စည်းထဲသို့ထည့်ပါ။
ဤအရာပြီးသည်နှင့်ပထမမျက်နှာပြင်တွင် install လုပ်ထားသော Xubuntu ကိုရွေးချယ်ပြီး၎င်းအတွက်လိုအပ်သောအရာအားလုံးကို load လုပ်လိမ့်မည်။
ကွန်ပျူတာကိုကွန်ပျူတာသို့တင်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက် Xubuntu installation wizard ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ပထမမျက်နှာပြင်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အားမေးလိမ့်မည်။ ထည့်သွင်းမည့်ဘာသာစကားကိုရွေးချယ်ကြပါစို့ အသစ် Xubuntu 18.04 LTS စနစ်။
ငါအခုသိပြီဒီပြီးပြီ ၎င်းသည် third-party software ကို install လုပ်ရန်နှင့် Xubuntu updates ကို install လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားတောင်းဆိုလိမ့်မည် installation လုပ်ငန်းစဉ်ကိုတိုးတက်နေစဉ်။
အောက်ပါရွေးချယ်မှုများတွင် ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အား disks များ၏ installation နှင့် partition အမျိုးအစားကိုပြလိမ့်မည်.
အခြေခံအားဖြင့်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့သည် disk တစ်ခုလုံးကိုဖျက်ပစ်ပြီး Xubuntu ကိုထည့်သွင်းပါက (ဤရွေးချယ်မှုကိုအထူးဂရုပြုပါကစုစုပေါင်းအချက်အလက်ဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်စေနိုင်သည်)
သို့မဟုတ်အခြားရွေးချယ်စရာများတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Xubuntu ကိုထည့်သွင်းရန် disk တစ်ခုကိုသတ်မှတ်နိုင်မည်သို့မဟုတ်စနစ်အတွက်အခန်းကန့်တစ်ခုကိုဖန်တီးရန်သို့မဟုတ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
partition "ext4" ကိုရိုက်ပြီး mount point ကို root "/" လို့ရိုက်ပါ။
Ya ငါတို့လုပ်နေတဲ့အပြောင်းအလဲတွေကိုသတိပြုမိတယ် ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ကျေနပ်မှုရှိပါကလက်ခံရန်သဘောတူပါက disc တွင်ပြောင်းလဲမှုများအကြောင်းသတိပေးမျက်နှာပြင်ရရှိပါမည်။
ဒီစနစ်နဲ့တပ်ဆင်မှုစတင်ပါလိမ့်မယ်။ နောက် option တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အချိန်ဇုန်ကိုရွေးချယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားတောင်းဆိုလိမ့်မည် စနစ်က configure လုပ်ဖို့။
ပြီးအောင်ငါတို့ဖန်တီးရမယ် စကားဝှက်တစ်ခုနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသုံးပြုသူအကောင့်, ဒီစကားဝှက်ဟာကျွန်တော်တို့မှတ်မိဖို့အရေးကြီးတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒါကငါတို့ log in လုပ်ပြီး system မှာအလုပ်လုပ်မှာပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ » Xubuntu 18.04 LTS တပ်ဆင်ခြင်းလမ်းညွှန်
Raul Plazas, G ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာနေ့လည်ခင်း။ ငါ့မှာ Ubuntu 17 ရှိတယ်။ အဲဒါကငါ့ကို ၁၈ ခုအထိတိုးမလာစေဘူး။ စက်စွမ်းအားနည်းတာကြောင့်ကြောက်တယ်။ ငါက update လုပ်ရုံပဲ။ ubuntu ကို update လုပ်ဖို့ option ထွက်လာရင်လုံးဝမတုန့်ပြန်ဘူး။ အင်တာနက်ပေါ်တွင်ဖတ်ရှုခြင်းက xubuntu သည်ကျိုးနွံသောစက်များကိုထောက်ပံ့ပေးပုံရသည်၊ သို့သော်၊ ubuntu အစား xubuntu မည်သို့တပ်ဆင်မည်ကိုကျွန်ုပ်လုံးဝနားမလည်ပါ။ မည်သည့် USB drive ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်ကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ရှာရမည်နည်း။
Raul Plazas, G ကိုပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်အသုံးမပြုဘဲသိမ်းဆည်းထားသောကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာဟောင်း (၂၀၀၆) ၏အသုံးပြုသူအမည်နှင့်စကားဝှက်ကိုပြန်လည်ရယူနိုင်သလားဆိုတာကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သိမ်းဆည်းထားသည့်ဖိုင်များကိုပြန်လည်ရယူချင်တယ်ဆိုရင် username နှင့်စကားဝှက်ကိုမေ့နေသမျှကာလပတ်လုံး PC ကိုကျွန်တော်မဖွင့်နိုင်ပါ။
Hard Drive ကိုအခြား linux PC တွင်တပ်ဆင်ပြီးအရာအားလုံးကိုသင်၏အတွင်းပိုင်း drive သို့ကူးယူနိုင်သည် (အကယ်၍ စာဝှက်မထားလျှင်)
ပုံမှန်အလုပ်လုပ်တယ် ကျွန်ုပ်မသိသေးသောအရာများရှိသည်။ သို့သော်ရုံးအလုပ်များနှင့်ဓာတုဗေဒတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်စုံတစ်ခုအလုပ်လုပ်လျှင်ကောင်းလိမ့်မည်ဟုဆိုကြသည်။
လေ့လာသူတိုင်းသင်ယူသင့်သောအခြေခံ command အချို့
Ubuntu 18.04 LTS ရှိ Firefox ဘရောက်ဇာအစားထိုးနိုင်သည်